स्मार्टफोन किन्दा ! स्क्रिन, प्रोसेसर, क्यामेरा र ब्याट्री को अवस्थाबारे जानकार हुनैपर्छ – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी इन्फो / स्मार्टफोन किन्दा ! स्क्रिन, प्रोसेसर, क्यामेरा र ब्याट्री को अवस्थाबारे जानकार हुनैपर्छ
ICT Khabar/आइसिटी खबर April 1, 2018	आइसिटी इन्फो, आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, आइसिटी मार्केट, प्रडक्ट लन्च/ अपडेट/ रिभ्यु, मोबाइल ग्याजेट्स, शिक्षा/चेतना Leaveacomment 716 Views
साधारणतया अधारमूत फोनहरु केवल फोन गर्न र उठाउँन प्रयोग गरिन्छ । स्मार्टफोन वा फिचर फोनभन्दा आकारमा धेरै साना आधारभूत फोनहरु धेरै सस्ता पनि रहेका छन् । यिनमा चलाउँन सजिला र परम्परागत किप्याड भएका हुन्छन् ।
विचार गर्नै पर्ने मुख्य कुराहरु
ठूलो स्क्रिन (५ इन्च वा सो भन्दा बढी)
स्मार्टफोनहरुको साइज बढिराखेको छ । एक समय ५ इन्चको स्क्रिन धेरै ठूलो ठानिन्थ्यो तर अब यो साइज ठूला फोनको सूचिमा न्यूनतम बनेको छ । ५.५ इन्चको आइफोन सिक्स प्लस पनि साइजकै कारण फ्याब्लेटको दुनियाँमा छिरेको छ । धेरै ठूलो साइजमा पनि मानिसहरुले ६ इन्च साइजका गुगल नेक्सस सिक्स र नोकिया लुमिया १५२० लाई बढी रुचाएका छन् । ग्यालेक्सी नोट सेरिज र आइफोन सिक्स पनि यहि रेन्जका चर्चित स्मार्टफोन हुन । एक हातले यस्ता फोन चलाउँन भने मुस्किल पर्छ ।
मध्यम स्क्रिन (४.५–४.९ इन्च)
यो वर्गका फोनहरु बोक्नलाई अझ सहज र मध्यम स्तरका पनि रहेका छन् । ४.५ इस्क्रिन साइज भएको एचटिसी मिनी टु, ग्यालेक्सी एस ५ एउटा उदाहरुण हो । यस्ता फोनहरुको राम्रो पक्ष भनेको एउटै हात ले चलाउन सक्नु हो । हातका औँलाहरु सहजै डिस्प्लेका सबै कुनामा प¥याउँन सकिन्छ ।
सानो स्क्रिन (४.५ इन्चभन्दा कम)
स्मार्टफोनहरुको दुनियाँमा साना तथा छरिता फोनहरुले ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यस्ता फोनहरु बोक्न तथा प्रयोग गर्न निकै सहज हुने गर्छन् । तर साना इस्क्रिन भएका फोनहरु निम्न स्क्रिन रेजुलेसन र साधारणतया स्मार्टफोनहरुमध्येमा साधारण र मध्यम क्षमताका रहेका छन् ।
कुनै पनि फोनको मुटु वा ज्यान भनेकै यसको प्रोसेसर अथवा सिपियु हो । यसले फोनका विभिन्न कार्यहरुका निम्ति कम्प्युटिङ क्षमता प्रदान गर्दछ । कुनै पनि एप्लिकेसन खोल्न वा चलाउँन प्रोसेसरकै भूमिका रहने गर्दछ । द्रुत गतिको प्रोसेसरले फोनको सम्पूर्ण कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्दछ । प्रोसेसरको गति गिगाहर्जमा मापन गरिन्छ । अजकाल प्रोसेसरमा कति ओटा कोरहरुको प्रयोग भएको छ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्दछ । प्रोसेसरमा जति बढी गति र कोर छन् उति नै प्रोसेसर राम्रो मानिन्छ ।
क्यामेराको गुणस्तर यसमा प्रयोग भएका तत्वहरुले निर्धारण गर्दछ । धेरै मेगापिक्सको क्यामेराले राम्रो फोटो खिच्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । ८ मेगापिक्सलको राम्रो क्यामेराले एउटा १३ मेगापिक्सलको क्यामेराले भन्दा धेरै राम्रो फोटो खिच्दछ । लेन्सको गुणस्तर र यसमा प्रयोग भएको सेन्सर अरु महत्वपूर्ण पाटा हुन् । फोटो वा भिडियोको गुणस्तर निर्धाण गर्ने सबैभन्दा महत्व पिक्सल डेन्सिटी (एएष्) को रहेको छ । एप्पलका क्यामेराहरु ८ मेगापिक्सल नै भए पनि हरेक वर्ष एप्पलका क्यामेराहरु अझ परिष्कृत र क्षमतावन हुदै आएका छन् ।
तपाईँको फोनको ब्याट्री कम क्षमताको छ भने संसारका कुनै अन्य फिचरहरुले सहयोग गर्न सक्दैनन् । ब्याट्रीको यही महत्वलाई मनन गरेर उत्पादक कम्पनीहरुले ठूला क्षमताका ब्याट्रीहरु आफ्ना फोनमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । खास फोनहरुले १७०० एकएएच देखि ३५०० एमएएच सम्मका ब्याट्रीहरु प्रयोग गदैै आएका छन् ।
Previous नेपालमा ‘मेडिकल ड्रोन’ को पहिलो उडान म्याग्दीबाट
Next कम्प्युटर १०० गुणा छिटो चलाउने प्रविधिको विकास